घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, प्रतितोला कति ? – Interview Nepal
घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, प्रतितोला कति ?
December 10, 2020 by Interview Nepal
काठमाडौ, मंसिर २५
बहुमुल्य पहेँलो धातु सुनको मूल्य बिहिबािर तोलामा ९ सय रुपैयाँले घटेको छ।
स्थानीय बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनााएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
यस्तै तेजाबी सुनसमेत प्रतितोला ९ सय रुपैयाँले ओरालो लागेको छ। बुधबार प्रतितोला ९२ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज भने प्रतितोला ९२ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको छ। बुधबार प्रतितोला एक हजार २१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने प्रतितोला एक हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
Tagged घट्यो सुनचाँदीको मुल्य
July 6, 2022 July 6, 2022 by Interview Nepal